Iftiiminta - Masturbalka macnaha maxay tahay iyo sidee ayuu u sameeyaa?
Sidee bay udhacdaa ragga?
Sidee bay dumarku u dabacsan yihiin?
Mabda 'ahaan, meesha ugu muhiimsan ee masturbalka waa in ay tahay mid dabiici ah. Masturbate wuxuu xitaa ku jiraa boqortooyada xayawaanka, sidaas darteed ma ahan wax laga xishoodo. Intaa waxaa dheer, qof waliba waa shakhsi ahaan, taas oo ah, ma jiro wax la karinayo oo dhan.
Maxaa loola jeedaa masturbay?
Sidaa daraadeed, wax walbaa wuxuu ku xisaabtamayaa is-qanacsanaanta, taas oo siinaysa raaxo shakhsiyeed, iyada oo aan lammaanuhu lug ku lahayn. Tan waxaa lagu gaari karaa iyada oo la isticmaalayo mid ka mid ah gacmihiisa gaarka ah ama jinsiyado gaar ah, oo inta badan taageersan riyooyinka erotic, suugaanta, sawirada ama filimada.
Masturbalinta xitaa waxay fulisaa ujeedo muhim ah xagga horumarkeeda, gaar ahaan kuwa qaangaarka ah: Iyaga oo raadinaya mid ka mid ah rabitaankiisa, waxay yeeshaan xiriir wanaagsan oo ay la yeeshaan jidhkooda inta lagu jiro qaangaadhka iyo sidaas darteed waxay bartaan baahiyaha galmada ay leeyihiin. Intaa waxaa dheer, in lagu xakameynayo, sidoo kale inta lagu jiro galmada, hormoonka farxada ayaa la sii daayaa, sidaa darteedna waxay u adeegi kartaa in lagu yareeyo buufiska.
Masturbateka ragga waa mid fudud. Ragga badankooda, waa ku filan inaad kiciso guska si loo gaaro duufaanta. Ujeedadaas awgeed, mashiinka ayaa la daboolay hal gacan, xoogga gacanta wuxuu ku xiran yahay dhamaanba doorbidkaaga, iyo dhaqdhaqaaqa habboon iyo hoos udhaqaaqa wuxuu hubiyaa farxada saxda ah.
Muhiimadda halkan waa isticmaalka jilciye ku habboon si looga fogaado xanuun. Intensity iyo tempo ayaa si tartiib tartiib ah u kordhi kara, ama marar badan oo kala duwan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira masturbaro loogu yeero ragga, kuwaas oo loo qaabeeyey siilka dhabta ah. Mowjadaha caaga ah waxay mararka qaarkood dareemaan dareen badan, mararka qaar way yar yihiin, oo mararka qaarkoodna waxaa lagu daray qalab loogu talagalay kicinta dheeraadka ah ama xitaa qaybo yar yar oo nabar yar.
Dabcan, ragga sidoo kale waxay kordhin karaan farxadooda: Qalabka gaarka ah ee guska wuxuu ka hortagayaa dhiiggu inuu ka soo baxo unugyada qalalaasaha ah kadib duufaanta. Dhismuhu wuxuu ku egyahay wareeg labaad.
Waxa kale oo lagugula talinayaa in aad diyaar u ahaato maryo, ka dibna, waa inaad adigu ku adkaataa inaad musqusha gasho ka dib markii dabaasha. Qaar ka mid ah hababka warbaahinta, tusaale ahaan isticmaalka nacnaca tufaaxa ama tuubbooyinka nadiifinta, laguma talinayo sababo nadiif ah habka. Haddii aad rabto inaad ku darto waxyaabaha, waa inaad kaliya kuxirtaa galmada ku haboon, sababtoo ah kaliya waxay damaanad qaadayaan in aysan jirin halis caafimaad. Ka dib marka la isticmaalo, qalabka ciyaarta waa in la nadiifiyaa.
Ballanqaadka gaarka ah ee ragga ah ee ragga ku dhiirigelinaya P-dhibic, dhowr dhicid gudaha gudaha derbiga hore ee futada. Ragga qaarkood waxay si toos ah ula kulmi karaan kicintaas iyada oo aan la taabanin guska orgasmka xooggan - halkan, waa mid ku haboon tijaabinta. Si kastaba ha ahaatee, halkan waa hab taxadar leh, sababtoo ah futada waa in marka hore la isticmaalo daaweynta aan caadi ahayn. Si aad uhesho P-dhibco si fiican, waxaa jira qandho gaar ah oo la ciyaaro, mararka qaarkood xitaa unugyada gariirka.
Iskudhexaad dheeri ah ayaa lagu soo bandhigayaa caafimaadka ragga: Dareemida joogtada ah, oo ay ku jirto masturbay ama galmo, waxay ka hortagtaa dhibaatooyinka qanjirka 'prostate'.
Dumarka, naas-nuujintu waa mid aad u adag, maadaama dumarku aanay si degdeg ah ugu jawaabin taabashada qaarkood. Inta badan maskaxda saafiga ah ee aagga barafka ah kuma filna. Waxaa lagu talinayaa in ay kicin ugu badnaan Raaxo mar kintirka iyo siilka - iyo marka ay timaado, sidoo kale G-bar iyaga la.
Haweeney Hooyo ah
Tani waxay ku taallaa dhinaca derbiga hoose ee xubinta taranka haweenka. Waxaa la gaari karaa farta, laakiin waxa ay u fududahay jinsiga gaar ah, ee horay loo sameeyey. Fikrad ahaan, xayawaankani waa in ay sidoo kale jilciyaan, ka dibna haweenka ku jira masturbay aad u badan oo orgasm ah suuragal ah.
Sida caadiga ah, xoojinta iyo xawaaraha taabashada waa in si tartiib tartiib ah loo kordhiyaa. Qaar ka mid ah goobaha erogenous naagta ka khayr Waraabiyo kordhaya farax, iyo taabashada dareensan yahay ka dib markii in muddo ah aad u fiican at. Waxaa intaa dheer, haweenku kaliya waa qoyan yihiin heer qiyaas ah - bilawga sidaas darteed waxay noqon karaan kuwo ku haboon in ay isticmaalaan jilciyeyaasha.
Dumar badan ayaa ka hela kicinta dheeraadka ah, tusaale ahaan fiilo shidaal, aad u xiiso leh. Taasi waa inay noqotaa mid caajis ah oo lagu tijaabiyo shey badan. Wax walba waa suurtagal, waxba maaha in la sameeyo. Xannuun aad u badan ayaa sidoo kale noqon kara kicinta hal mar ee ibta naaska, tusaale ahaan jilbaha ama faraha gacanta gacanta.
Waxaa jira adeegyo badan oo kala duwan oo ah dumarka. Saameyntu waxay u dhaxaysaa marinka fudud ee loo yaqaan "vibrator" ilaa qalabka culus halkaas oo haweenku si macquul ah ugu fuuli karaan. Xaaladaha badankood, si kastaba ha ahaatee, labada gacmood ama kaliya dharbaaxo ama vibrators ayaa ku filan.
Markaad isticmaashid gacmaha waa inaad hubisaa in ciddiyaha farankoodu aysan lahayn jajab fiiqan, waana inaad nadiifisaa gacmahaaga ka hor inta aanad niyad jabin.
Gaar ahaan haweenka ay ku adagtahay in ay gaaraan orgasm ee ka faa'iideysta jinsiga caadiga ah ee ka yimaada si ay u sii ogaadaan aagagga qulqulaya inta lagu jiro naas nuujinta. Iyadoo khibrada qaarkood, waxay si tartiib ah u tilmaami karaan lammaanaha inta galmada la galmoonayo, qaybaha uu ku dhiirigelinayo habka iyo in loo keeno dareen xoog leh.